တိမ်မြှုပ်နေတဲ့အလှတရားများပြည့်နှက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်　တောင်ဘက်ပိုင်းက　ကျောက်ဖြူမြို့လေး (ရမ္မာဝတီ) 🌊⛰ – YANGON STYLE
တိမ်မြှုပ်နေတဲ့အလှတရားများပြည့်နှက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်　တောင်ဘက်ပိုင်းက　ကျောက်ဖြူမြို့လေး (ရမ္မာဝတီ) 🌊⛰
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ခရီးအသွားအလာနည်းပြီး ပုန်းကွယ်ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ အလှတရားတွေအပြည့်နဲ့ ကျောက်ဖြူမြိူ့လေးကို သဒ္ဓါနဲ့အတူ အခြေဆန့်ကြမယ်လေ……
ရခိုင်ပြည်ကြီးက အလှတရားတွေပေါများသလောက် ခရီးအသွားအလာနည်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကျောက်ဖြူမြို့လဲအပါအဝင်ပေါ့။ ကျောက်ဖြူမြို့ကြီးဘယ်လောက်လှသလဲဆိုတာ သဒ္ဓါတော့ စာဖွဲ့ပြလို့ကုန်မယ်မထင်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်ကြီးမှာ လေးဝတီဆိုပြီး မြို့ကြီး၄ မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ ကျောက်ဖြူမြိ့ကို ရမ္မာဝတီလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ကျောက်ဖြူတောင်ခြေရင်းနားမှာတွေ့ရတဲ့
အဖြူရောင်ကျောက်တုံးကြီးကိုအစွဲပြုပြီး ကျောက်ဖြူရယ်လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်ရှိ အကြီးဆုံးရမ်းဗြဲကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးသာယာလွန်းလှတဲ့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၅၄ အုပ်စု၊ရွာပေါင်း ၂၆၀ ကျော်၊ ကျွန်းပေါင်း ၇၀ ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟုလည်း မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမြို့ရေနက်ဆိပ်ကမ်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးရေနက်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ကျောက်ဖြူမြို့အကြောင်းကတော့ နောက်မှ အရှည်ကြီး သက်သက်ရေးပေးမယ်နော်။ ခုတော့ ကျောက်ဖြူမှာ ဘယ်နေရာတွေ လည်လို့ရမလဲ သဒ္ဓါနဲ့အတု သွားကြည့်လိုက်ရအောင် 🤩🤩ကျောက်ဖြူမြို့ကိုသွားလည်မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး အချိန် (၃) ရက်လောက်တော့ပေးဖို့လိုမယ်နော်။ 🤗
သွားလည်ပြီးရင်လဲ မပြန်ချင်တော့လောက်အောင် အလှအပတွေက သင့်ကိုဆွဲဆောင်နေပါလိမ့်မယ်😍
ကျောက်ဖြူရောက်ရင် ပထမဆုံးသွားရောက်ဦးခိုက်သင့်တာကတော့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ပေါ်တော်မူ ကံ့ကော်တောဘုရားနှစ်ဆူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူရောက်တာနဲ့ မသွားမဖြစ်သွားသင့်တဲ့နေရာထဲမှာ ကံ့ကော်တောဘုရားကအပါအဝင်ပါ။ မန်းလေးရောက်ရင် မဟာမြတ်မုနိကို ဦးတိုက်ကြသလိုပေါ့။
အံ့သြဖွယ်ရာတန်ခိုးတော်များနှင့် ကံ့ကော်တော်ဘုရားနှစ်ဆူဟာ ကျောက်ဖြူမြို့ကနေ ၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ ဂုံးချွိန်ရွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဘုရားသမိုင်းကတော့ နောက်မှသက်သက်ရေးပေးမယ်နော် 😊
ကျောက်တစ်လုံးလှိုဏ်ဂူဘုရားကတော့ ခုနက ကံ့ကော်တောသွားတဲ့လမ်းနဲ့တစ်ကြောင်းထဲပါပဲ။ ကျောက်ဖြုမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက် ၃ မိုင်ခန့်အကွာ ရမ်းဗြဲ- ကျောက်ဖြူ ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးမှာ လောင်းတစ်ပေါက်တောင်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ တောင်ရဲ့အစွန်ဆုံးမှာ ကျောက်သားလှိုဏ်ဂူများအဖြစ်သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှိုဏ်ဂူများအတွင်းမှာတော့ ဆင်းတုတော်များကိုဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ ပင်လယ်ပြာပြာကြီးပေါ့ 😍
နတိကျောက်အပေါ်ထပ်မှာ လေတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့ ဒီလိုလေး chill
နတ်ကျောက်ကမ်းခြေကတော့ သဒ္ဓါ့အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးပေါ့။ အပြင်မှာရှုခင်းကတော့ တကယ်ရူးခါသွားခဲ့ပါတယ် 😍 ရေကျတဲ့အချိန်ဆို ကျောက်ဂူထဲဝင်လို့ရတယ်။ သဒ္ဓါတို့ကရေတက်ချိန်နဲ့ တိုးသွားတော့ အပေါ်ကိုပဲတက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲတန်ပါတယ်။ဆက်သွားရင် ကျောက်ဆောင်၊ ကျောက်တန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကမ်းခြေကြီးရှိပါတယ်🤩 ရှုခင်းကတော့ တကယ့် အမေးဇင်းပဲ။ အော် ကျောက်ဖြူမြို့လေးရဲ့အရိုင်းဆန်တဲ့အလှအပတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သိစေချင်လိုက်တာဆိုပြီး အတွေးပေါ်လာပါတယ်။ နတ်ကျောက်ကမ်းခြေမှာ အခုဆို အမုန်းတရားကင်းမဲ့ဇုန်ဆိုတဲ့ chill လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလုပ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းအရမ်းကို အဆင်ပြေပြီး Sunset ကိုလဲသေချာကြည့်လို့ပြီပေါ့။ အရင်ကဆို အဲ့လိုဆိုင်တွေမရှိတော့ ဧည့်သည်တွေစိတ်ဝက်စားမှုလဲနည်းတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ ညနေဆို နတ်ကျောက်မှာသွား Chill လို့ရပြီလေ 😎😎
အမုန်းတရားကင်းမဲ့ဇုန် မှာ chill
နတ်ကျောက်ကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့ အမုန်းတရားကင်းမဲ့ဇုန်ဆိုတဲ့ Chill လို့ကောင်းတဲ့နေရာသစ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ညနေဆို အုန်းရေသောက်ရင်း Sunset ကြည့်မလား? အတွဲတွေအပန်းဖြေမလား? မိသားစုလိုက် စားသောက်ကြမလား? ရှယ်ပဲလေ။ ခုံတွေကအစ သေချာလုပ်ပေးထားတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာမထိုက်ချင်ရင် ကမ်းစပ်က ခုံတန်းတွေမှာ အိပ်ပြီး ဆွေးလို့လဲရသေးတယ်နော် 🤗 My fav place ever ပါပဲ။ ရောက်ရင်သွားဖြစ်အောင်သွားကြည့်ပါ။ ကျောက်တစ်လုံးဘုရားရဲ့ လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းမှာပဲရှိတာပါ။ လမ်းကူးလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီ။
ကျောက်ဖြူကမ်းနားလမ်းဘေးမှာပဲတည်ရှိနေတာပါ။ စေတီယျတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ စေတီယျဓာတ်ပေါင်းစုစေတီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်က်ုတက်ဖို့ လှေကားထစ်လေးတွေရှိပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကကြည့်ရင်လဲ ရှေ့ကပင်လယ်ပြင်ကြီးကို မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သာသနာ ၂၅၀ဝ နဲ့ လွမ်းစေတီ
စေတီယျတောင်ကနေ တောင်ပေါ်တောလမ်းလေးအတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ လွမ်းစေတီကိုတွေ့ရမှာပါ။ အောက်ကနေ လမ်းမကြီးအတိုင်းသွားလဲရပါတယ်။သဒ္ဓါတို့က အောက်ပြန်မဆင်းချင်တော့လို့ အပေါ်က တောလမ်းလေးအတိုင်း နောက်ဘုရားတစ်ဆူကိုဆက်သွားပါတယ်။ ဘေးတစ်ဖက်မှာ ပင်လယ်ပြာပြာကြီးကလဲကိုယ်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်နော် 😍😍😍
(၇) သာသနာ ၂၅၀ဝ
သာသနာ ၂၅၀ဝ အောက်က
သာသနာ ၂၅၀ဝ သွားတဲ့လမ်း
ခုနကတောလမ်းအတိုင်းဆက်သွားရင် သာသနာ ၂၅၀ဝ စေတီကိုဖူးမြော်ရမှာပါ။ တောင်လမ်းတစ်လျှောက်သွားလိုက်ရုံနဲ့ စေတီ ၃ ဆူကိုဖူးမျှော်ရမှာပါ။ အဆင်းလမ်းလှေကားလေးကနေဆင်းသွားရင် ကမ်းခြေကြီးက အတိုင်းသားဆီးကြိူနေတာ 🤗 အဲ့နေရာလေးအရမ်းကြိုက်။ တစ်ဖက်မှာတောင်တန်း၊ တစ်ဖက်မှာပင်လယ်ပြာပြာနဲ့ ပနံတင့်လိုက်တာဆိုတာ 😍
Photo crd to Original owner
ကဲ ကျောက်ဖြူရဲ့ Attraction နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မဆိပ် 🧐 အဲ့ဆိပ်ကမ်းလေးက ငါးဒိုင်၊ပုဇွန်ဒိုင်တွေအပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်ဆူးလေလိုမျိုး လှုပ်ရှားမှုတွေအပြည့်နဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်းရွာတွေကလူတွေ၊ငါးဖမ်းထွက်လာတဲ့ ငါးရှာသမားတွေအကုန်လုံး ဂျပန်မဆိပ်က ဒိုင်တွေမှာ ငါး၊ ပုဇွန်တွေကိ်ုပြန်ပြီးလာသွင်းကြတာပေါ့။ ကျွန်းတွေက လာသမျှစက်လှေတွေက ဒီဆိပ်ကမ်းမှာပဲကပ်ကြပြီး ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်ကိုဈေးလာဝယ်ကြတဲ့လူတွေများပါတယ်။ ကမ်းပေါ်မှာပဲ ကျောက်ဖြူဈေးကလဲရှိနေတယ်လေ။
နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ နွားလှည်းတွေပါ။ အော် နွားလှည်းဆိုလို့ မြို့ပေါ်မှာသွားတယ်မထင်လိုက်နဲ့နော် ရေထဲမှာသွားတဲ့ နွားလှည်းတွေပါ။ စက်လှေတွေ ကမ်းကိုမကပ်နိုက်တဲ့အချိန်မှာဆို လူတွေက နွားလှည်းပေါ်တက်ပြီး ကိုယ်စီးမယ့်စက်လှေဆီကိ်ုသွားရပါတယ်။ 🤩 အဲ့လိုမျိုး ဘယ်မှာစီးဖူးကြလဲပြော 😎😎😎
ရန်ကုန်ကလူတွေအကြိုက် လက်လက်ဆက်ဆက် ငါးပုဇွန်၊ ဂုန်း၊ ဂဏန်းစတဲ့ပင်လယ်စာမျိုးစုံကို ရှယ်ဝယ်ပြီးစားလို့ရတယ်နော်။ ပင်လယ်ကမ်းနားဘောင်ပေါ်မှာပဲဈေးရှိတော့ ပင်လယ်ကလာသမျှ ဈေးပေါ်ချက်ချင်းတင်၊ ချက်ချင်းဝယ်စား။ ကဲ ဒီလောက်ထိလက်ဆက်ဦးမလားကွယ်။ ပြီးတော့ရခိုင်လက်ညှစ်မုန့်တီစစ်စစ်ကိုစားလို့ရသေးတယ်နော်။ သဒ္ဓါဆို တစ်ခါစားရင် ၄ ပွဲပဲ။ မယုံမရှိနဲ့ ဆွေမျိူးမေ့သွားမယ်။ ကိုယ်အရင်ကစားခဲ့တဲ့မုန့်တီတွေနဲ့ မတူတာတော့အမှန်ပဲရ ကိုယ်ရှေ့မှာပဲ မုန့်နှစ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ညှစ်ပေးပြီး အာပူလျှာပူလေး။ အမလေးရေးရင်တောင် သရေကျလာပြီ 😁🤤🤤 ဈေးထဲမှာ ရခိုင်အထည်တွေ၊ ငါးမုန့် စတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလဲအကုန်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
(၁၀) ကျောက်ဖြူ View Point နဲ့ ဂေါက်ကွင်း
ကျောက်ဖြူ View Point
View point မှာဒီလိုလေး ဓာတ်ဖမ်း
ကျောက်ဖြူကမ်းနားရောက်ရင် View point ကိုလဲတက်ဖြစ်အောင် တက်ကြည့်သင့်ပါတယ်နော်။ အပေါ်စီးကနေ ပင်လယ်ပြင်ကိုကြည့်ရတဲ့အရသာက ဘလိုပြောရမလဲ။စိတ်ထဲမယ် ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာဆိုတာ ကျောက်ဖြူကိုမမီတော့တာအမှန်။ ကျောက်ဖြူမြို့အဝင် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကလဲ ခမ်းနားစွာကြိူဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ လမ်းတဖက်ခြမ်းမှာတော့ ကျောက်ဖြူလေဆိပ်နဲ့။ ဂေါက်ကွင်းကြီးရှိပါတယ်။ ညနေဆို ဂေါက်ရိုက်တဲ့သူများနဲ့၊ ကမ်းခြေမှာ ဘောလုံးကန်၊ လမ်းလျှောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ အသက်ဝင်လျက်ပေါ့ ❤️🌊🌊
ကျောက်ဖြူ ငလပွေ့ဆိပ်ကမ်းလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ မေးပြီးသွားလို့ရတယ်။ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီတွေလဲရှိတယ်။ညနေဖက်မှသွားရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သူကတော့ သင်္ဘောအကြီးကြီးတွေကမ်းကပ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းပါ။ ညနေဆို ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးနဲ့ လေညှင်းခံထွက်ရင် အိုကေမှာစိုပြေပေါ့ 🤩
(၁၂) Blue Ribbon Cafe
ဒါက Blue Ribbon Cafe က City View
ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး ကျောက်ဖြူနာရီစင်နဲ့ မြို့လည်ခေါင်ရှုခင်းကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။ ညနေခင်းဆို ကော်ဖီဆိုင်ထိုင် လေတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့ ရှုခင်းလေးကြည့်။ ကျောက်ဖြူမြို့လည်နာရီစင်နားက Summit Center ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတာမို့ သွားရလာရလွယ်ကူပါတယ်။ ပြောနေရင်း လွမ်းလာပြီလေ 🌊
(၁၃) Hotel Varanathi Restaurant
ဗာရာဏသီ hotel အပေါ်ထပ်view
ကျောက်ဖြူရဲ့ အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်ကြီးပေါ့။ ဟိုတယ်မှာတော့ မတည်းနိုင်ဘူးလေ 😁 အပေါ်ထပ်မှာတော့ ညစာသွားစားကြည့်ပါ။ သူ့ View ကကျတော့ တစ်မျိူးပေါ့။ မြို့လည်ခေါင်ရှုခင်းမဟုတ်ပဲ ကမ်းနားကို အများဆုံးမြင်ရမှာပါ။ Restaurant ရဲ့အပေါ်ဆုံးသာတက်သွား အမြင်မတူတဲ့ View နောက်တစ်ခုကိုမြင်ရမှာသေချာတယ်။ တည်းမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ Page ထဲ
ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။5stars hotel ဆိုတော့ ရှယ်ပဲပေါ့။
(၁၄) စွန်ပန်းချိုင်ကမ်းခြေ 🏖️
ကျောက်ဖြူမြို့ကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ခုပေါ့။ အဲ့ကျွန်းအကြောင်းဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်နော် ☺️
(၁၅) မလကျွန်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေး
ကံ့ကော်တောဘုရားအလွန်ကသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်နေတဲ့နေရာကိုလည်းသွားလည်လို့ရပါသေးတယ်နော်။ အပေါ်စီးကနေ ပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းတွေကို ကြည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်သွားလို့ရတာတွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ နဲနဲဝေးတော့ နောက်ထပ်အချိန်ပေးမှရမယ့် နေရာတွေပါ။⛰ မင်းပြင်က မိုးလေဝသတိုင်းတဲ့နေရာ
⛰ ပင်လယ်ပြင်ထဲက လောင်းကျိူး
⛰ ကျောက်ဖြူမြို့စတင်ဖြစ်ပေါ်ရာ ကျောက်ဖြူတောင်
⛰ သစ်ပုတ်တောင်နားက မီးတောင်
⛰ ဆိတ်ကျွန်း ( မိုးတွင်းသွားလို့မရပါ)
⛰ အခြားကျွန်းတွေကိုလဲ လှေနဲ့သွားလို့ပါသေးတယ်နော်။ အဲ့လိုဆိုရင်တော့ တစ်လနေရင်တောင် သွားလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဖူး 😂😂
ရန်ကုန်ကနေ Express, Flight အကုန်ရှိပါတယ်။
Express တွေကတော့ ၁၈၀ဝ၀, ၂၀ဝ၀ဝ ခန့်ရှိပြီး နေ့လည် ၂ နာရီဝန်းကျင်ကိုထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ရိုးမကြီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး နောက်နေ့ မနက် ၉နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာ ကျောက်ဖြူမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမြို့နားနီးတာနဲ့ ကားပေါ်ကနေဆင်းချင်နေပါပြီ။ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုတောက်လျှောက်မြင်လာရတာကိုး။ ကားနာမည်တွေကတော့ အောင်သစ္စာ၊ မာန်သစ္စာ၊ မျိုးဆက်သစ်၊ ရဲအောင်လံ စတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိတာမို့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကားကိုရွေးချယ်စီးနိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်ကတော့ တစ်ပတ်ကို ၅ ရက်ထွက်ပါတယ်။ ၈သောင်း ၁ သိန်းဝန်ကျင်ခန့်ရှိပါတယ်။
Hotel တွေဆိုရင်တော့ ကမ်းနားမှာ Palace hotel, Kyauk Phyu Hotel, ဗာရာဏသီစတဲ့ နာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေရှိပါတယ်။ မြို့ထဲမှာတော့ Hnin Taung Hotel ဆိုတာရှိပါတယ်။တခြား Motel တွေ Guest House တွေလဲရှိပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် Cb မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ရှင့်။ သဒ္ဓါမေးပေးလို့ရပါတယ်။ သဒ္ဓါကျတော့ အဲ့မှာအိမ်ရှိတော့ ဟိုတယ်တွေမတည်းခဲ့ပါဘူး 😁😁
အဓိကစားစရာကတော့ လက်ညှစ်မုန့်တီပါ။ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက် မုန့်တီပတ်စားတာနဲ့တင်အချိန်ကုန်သွားပါတယ် 🤣 ပြီးတော့ ပင်လယ်စာပေါ့။ အမုန်းတရားကင်းမဲ့ဇုန်မှာလဲရပါတယ်။ဈေးထဲကိုယ့်ပါကိုသာစိတ်ကြိုက်ဝယ်ပြီး ချက်စားပါ 😁😁 ဈေးလဲတန်မှတန် စိတိကြိုက်ရွေးဝယ်ပြီးစားပေတော့ 🤤🤪ရခိုင်ဆိုတော့ Safe မဖြစ်မှာကိုယ်စိတ်ပုူနေကြသေးတယ်မလား။ ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်။ သဒ္ဓါ ၁၀ ရက်ကျော်နေခဲ့တာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီး အလည်လိုက်ပို့ချင်တာ။ ဓာတ်ပုံထဲထက် အပြင်မှာ အဆ ၁၀ဝ လောက်ပိုလှတာအမှန်ပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျောက်ဖြူသူ/သားတွေပေါ့။ 🤪 အကုန်အချောလေးတွေကြီးပဲနော်။ ကိုယ်သာရန်ကုန်ကလာပြီး အသားကမဲတူးနေတာ။ သူတို့တွေက ဖြူဖွေးနေတာဗျ။
ကျောက်ဖြူမြို့ကြီးကို တစ်ခါလောက်တော့အရောက်သွားစေချင်မိတယ်။ မယုံမရှိနဲ့ ဂျင်းမထည့်ဘူး တကယ်လှတဲ့နေရာပါ။ ကမ်းခြေဆိုလဲ ငပလီထက်ပိုပြီးရှည်ပါတယ်။ Virgin Beach လေးပေါ့။ သဒ္ဓါတော့ ဆောင်းတွင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားဦးမယ် သွားရမယ့်နေရာတွေကျန်သေးလို့ 😁
တခြားသိချင်တာရှိလဲ CB ကို အချိန်မရွေးလာမေးလို့ရပါတယ်ရှင့် ☺️(မှတ်ချက် – အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို သေချာစေရန် ကျောက်ဖြူမဂ္ဂဇင်းမှမှီငြမ်းရေးသားထားသည်)ကျောက်ဖြူမြို့ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းပီး အေးချမ်းသာယာတဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဘာစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမှဖြစ်စရာမလိုပါဘူးနော် ☺️☺️☺️ကျောက်ဖြူအကြောင်းရေးမယ်ပြောတော့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေရှာပြီးလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဆရာဦးထွန်းနိုင်ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် 🙏🏻😊🤗 လွတ်လပ်စွာ shareနိုင်ပါတယ်။ ပုံနှင့်စာများကို Copy ခြင်းမပြုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ် 🤗အားလုံးပဲ သာလီစွပါ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#ကျောက်ဖြူ #ရခိုင် #ရမ္မာဝတီ #TDTravelNotes
Virginbeach #Myanmar #TDTravelDiary
Rakhine #Tourism #Longbeach